Ihowuliseyili 36V 250W iZiko elinamandla leMoto yoMbane weeBhayisikili kunye noMthengisi | IIMI
I-36V 250W iZiko elinamandla leMoto yeBhayisikile
INDLELA YOKUTHUTHUZELA 2021 Ibhayisekile yombane iya kuchukumisa ngamandla aphendulayo embindini wedrive, ekunika ukusebenza okuphezulu kuko konke ukukhwela.
Icwecwe, lihlala ixesha elide kodwa linobunzima, UKUTHUTHUKISWA phakathi kwebhayisekile yombane ngoku ilungelelene kakuhle kunye nendawo yayo yokuhamba ngeemoto kunye nebhetri.
Iziko lokunyusa ibhetri kulula ukususa, ke unokuyibiza naphina nanini na. I-CST enkulu ebanzi ye-2.0 yokuxhathisa amavili okukhwela ngokukhululeka kunye nesantya esiphezulu. Izinto ezinomgangatho ophawulwe ngeSamsung yenyani 13Ah (468WH) Ibhetri yeLi, Shimano Nexus igiya zangaphakathi zehabhu kunye neTektro 180mm Disc Brakes zokumisa okuphezulu.
Amava okuthuthuzela okuphezulu kunye nokusebenza ngelixa uthatha imeko yedolophu ngebhayisekile yethu yombane.
Yenza i-adventure yakho kwaye uhambe umgama ongaphezulu ngeebhayisekile zombane ze-EABL
I-Motor ye-Mid enamandla kunye ne-Great Torque Sensor
I-COMFORT kunye ne-Mid Motor inika inkxaso enamandla kakhulu kwiimeko ezahlukeneyo, ezinje ngemigama emide, ngokuchasene nomoya okanye kwiinduli. Imoto eyilelwe ngokudibanisa isivamvo sesantya kunye nesixhobo sokuvavanya torque. Enkosi kwisilawuli esihlangeneyo esikrelekrele, inokunceda umkhweli aqonde ukuba kufuneka abe yintoni amandla. Yimoto elungileyo enobunzima benzala kunye neemvakalelo zokukhwela ngokukhululekileyo.
Iibhendi zeTektro Disc
Iziqhoboshi zediski zangaphambili nezangasemva ze-COMFORT zifuna ulondolozo oluncinci. Iziqhoboshi zeediski zihlala zinamandla ngakumbi kwaye iibhuleki zincinci ngokukhawuleza xa kuthelekiswa nokuqhekeka komphetho.
I-COMFORT ixhotywe nge-13Ah / 36V (468Wh) yeLi-ion Polymer ibhetri enamandla kunye neyomeleleyo. Ibhetri ye-13Ah inebanga ukuya kuthi ga kwi-60km. Ibhetri iyasuswa kwaye inokutshixwa. Itshaja ifakiwe nebhayisekile.
Umboniso oLungileyo weScreen seLcd
Iza nomboniso weLCD omnandi kunye nentloko ehlengahlengisiweyo, onke amaqhosha adityanisiwe kwiscreen sesikrini, esenza ukuba ihambelane. Umboniso ukhanyisiwe kwaye kulula ukusebenza. Ngokucinezela iqhosha ungafunda ulwazi oluninzi, njengesantya, umgama kunye nokusetyenziswa kwebhetri. Inkxaso iyema ngesantya esingaphezulu kwe-25 km ngeyure. Oku kugqitywe ngokusemthethweni. Umboniso unonxibelelwano lwe-USB ngasemva. Oku kukunika ithuba lokutshaja ifowuni yakho okanye ukukhangela xa uqhuba.
IAluminiyam 6061 Ingxubevange * 480MM
RST Ukurhoxiswa ifolokhwe
Isantya seShimano Nexus 7
Iseti yeCrank ye-42T
IKenda idiniwe ububanzi nge-2.0
Ukuchasana nomhlwa we-KMC
Ibha yeSixeko ebanzi
IVelo Plush Saddle
22.9kg kubandakanya iBhetri
Ukuboniswa kweZiko leMisebenzi yeLCD
I-250W Mid Drive (Incopho kwi-350W)
Qhuba / woluvo
ISAMSUNG yokwenene 36V 13Ah Li-Ion (468WH)
Kuxhomekeka kwinqanaba lokuNcediswa kwezeMoto. Uluhlu lwama-50 ~ 60km
25 ~ 27kph ngoNcedo lwaMandla
Iiyure ezi-2-6 ezixhomekeke kwisalathi senqanaba lebhetri
Ibhetri kunye neMoto
Iinxalenye zebhayisekile kunye neenxalenye
Egqithileyo Inyathelo elitsha eliQinisekayo leMfashini ngebhayisekile kaMbane
Okulandelayo: Isantya se-Unisex esine-Lightweight isantya soMbane weBhayisikile